Ampidino Box Office Tycoon APK ho an'ny Android
Ampidino Box Office Tycoon
Ampidino Box Office Tycoon,
Tongava blockbuster vaovao aminny indostrianny sarimihetsika: Manangana empira sarimihetsika any Hollywood izay hamokatra sarimihetsika ary an-tapitrisany no hijerenizy ireo. Raha tianao ny lalao Idle Tycoon Management, handroaka anao ity lalao fanaovana sarimihetsika vaovao ity. Mahazoa vola arakaraka ny itomboanny fanjakanny boaty ary asaivo mijery sarimihetsika vaovao ny olona.
Leo ny ho mpitrandraka na mpamboly na manangana valan-javaboary, gym, tanàna, fivarotana lehibe, orinasa, fonja, sakafo na empira hotely? Vonona ny ho tonga kapitalista sarimihetsika mahery vaika tadiavini Hollywood ve ianao?
Ireo sinema mampiantrano anao dia manohy mamokatra vola na dia ivelanny Internet ianao na tsy liana aminilay lalao. Jereo ny mpanjifa mifanakalo aminny teatra sarimihetsikao ary raiso ny fiheverany ny sarimihetsika. Manamboara arcade, karaoke, teatra, biraonny tapakila ary maro hafa.
Tongava mpandraharaha sarimihetsika manankarena indrindra: atombohy ny orinasanao manokana, mahazoa vola ary ho tonga mpanao filma tsara indrindra eran-tany!